Find the Best Deals on Darya Rugs Suzani Hand-Knotted Multicolor Area Rug M1867-223
Darya Rugs Suzani Hand-Knotted Multicolor Area Rug M1867-223
Darya Rugs M1867-223 Inspired by embroidered Suzani textiles from Uzbekistan, this rug features floral motifs in modern palettes and compositions. Hand-knotted of vegetable-dyed wool, the rugs are designed to retain their vibrancy for generations to come. Features: -Color: Multicolor.-Material: 100% wool.-Made in Pakistan.-Hand-knotted .-One of a kind.-Primary Color: Blue/Pink.-Primary Pattern: .-Holiday Theme: No -Holiday: ..-Rug Shape: .-Construction: Handmade.-Tery Color: Blue/Pink.-Primary Pattern: .-Holiday Theme: No -Holiday: ..-Rug Shape: .-Construction: Handmade.-Technique: .-Recycled Content: No -Total Recycled Content (Percentage): .-Post-Consumer Content (Percentage): .-Remanufactured/Refurbished: ..-Eco-Friendly: No.-Fringe: Yes.-Distressed: No.-Life Stage: Adult.-Gender: Neutral.-Theme: .-Reversible: No.-Outdoor Use: No.-Floor Heating Safe: No.-Water Resistant: No.-Stain Resistant: No.-Fade Resistant: No.-Product Care: Blot spills with a cloth, professional rug cleaning recommended as needed. Keep rug in place with a rug pad..-Rug Pad Recommended: No.-Licensed Product: No.-Rug Sample Available: No.-Compatible Rug Sample Part Number: .Specifications: -CRI Certified: No.-Commercial OR Residential Certifications: No -GOTS Certified: .-FSC Certified: ..-Commercial ONLY Certifications: No -PEFC Certified: .-ISTA 3A Certified: .-Blauer Engel: .-TÜV Rheinland zertifiziert: .-Stiftung Warentest Note: ..-Goodweave Certified: No.-SATRA Approved: No.-California Proposition 65 Warning Required: No.Dimensions: -Pile Height: 0.5.-Overall Width: 75.-Overall Length: 113.-Overall Product Weight: 41.-Rug Size: .… read more
Darya Rugs Suzani Hand-Knotted Multicolor Area Rug M1867-220
Darya Rugs M1867-220 Inspired by embroidered Suzani textiles from Uzbekistan, this rug features floral motifs in modern palettes and compositions. Hand-knotted of vegetab...
Darya Rugs M1867-220 Inspired by embroidered Suzan...
Darya Rugs Suzani Hand-Knotted Multicolor Area Rug M1867-271
Darya Rugs M1867-271 Inspired by embroidered Suzani textiles from Uzbekistan, this rug features floral motifs in modern palettes and compositions. Hand-knotted of vegetab...
Darya Rugs M1867-271 Inspired by embroidered Suzan...
Darya Rugs Suzani Hand-Knotted Multicolor Area Rug M1867-218
Darya Rugs M1867-218 Inspired by embroidered Suzani textiles from Uzbekistan, this rug features floral motifs in modern palettes and compositions. Hand-knotted of vegetab...
Darya Rugs M1867-218 Inspired by embroidered Suzan...
Darya Rugs Suzani Hand-Knotted Multicolor Area Rug M1867-199
Darya Rugs M1867-199 Inspired by embroidered Suzani textiles from Uzbekistan, this rug features floral motifs in modern palettes and compositions. Hand-knotted of vegetab...
Darya Rugs M1867-199 Inspired by embroidered Suzan...
Darya Rugs Suzani Hand-Knotted Multicolor Area Rug M1867-209
Darya Rugs M1867-209 Inspired by embroidered Suzani textiles from Uzbekistan, this rug features floral motifs in modern palettes and compositions. Hand-knotted of vegetab...
Darya Rugs M1867-209 Inspired by embroidered Suzan...
Darya Rugs Suzani Hand-Knotted Multicolor Area Rug M1867-259
Darya Rugs M1867-259 Inspired by embroidered Suzani textiles from Uzbekistan, this rug features floral motifs in modern palettes and compositions. Hand-knotted of vegetab...
Darya Rugs M1867-259 Inspired by embroidered Suzan...
Darya Rugs Suzani Hand-Knotted Multicolor Area Rug M1867-270
Darya Rugs M1867-270 Inspired by embroidered Suzani textiles from Uzbekistan, this rug features floral motifs in modern palettes and compositions. Hand-knotted of vegetab...
Darya Rugs M1867-270 Inspired by embroidered Suzan...
Darya Rugs Suzani Hand-Knotted Multicolor Area Rug M1867-228
Darya Rugs M1867-228 Inspired by embroidered Suzani textiles from Uzbekistan, this rug features floral motifs in modern palettes and compositions. Hand-knotted of vegetab...
Darya Rugs M1867-228 Inspired by embroidered Suzan...
Darya Rugs Suzani Hand-Knotted Multicolor Area Rug M1867-283
Darya Rugs M1867-283 Inspired by embroidered Suzani textiles from Uzbekistan, this rug features floral motifs in modern palettes and compositions. Hand-knotted of vegetab...
Darya Rugs M1867-283 Inspired by embroidered Suzan...
Darya Rugs Suzani Hand-Knotted Multicolor Area Rug M1867-231
Darya Rugs M1867-231 Inspired by embroidered Suzani textiles from Uzbekistan, this rug features floral motifs in modern palettes and compositions. Hand-knotted of vegetab...
Darya Rugs M1867-231 Inspired by embroidered Suzan...
Darya Rugs Suzani Hand-Knotted Multicolor Area Rug M1867-234
Darya Rugs M1867-234 Inspired by embroidered Suzani textiles from Uzbekistan, this rug features floral motifs in modern palettes and compositions. Hand-knotted of vegetab...
Darya Rugs M1867-234 Inspired by embroidered Suzan...
Darya Rugs Suzani Hand-Knotted Multicolor Area Rug M1867-214
Darya Rugs M1867-214 Inspired by embroidered Suzani textiles from Uzbekistan, this rug features floral motifs in modern palettes and compositions. Hand-knotted of vegetab...
Darya Rugs M1867-214 Inspired by embroidered Suzan...
Darya Rugs Suzani Hand-Knotted Multicolor Area Rug M1867-245
Darya Rugs M1867-245 Inspired by embroidered Suzani textiles from Uzbekistan, this rug features floral motifs in modern palettes and compositions. Hand-knotted of vegetab...
Darya Rugs M1867-245 Inspired by embroidered Suzan...
Darya Rugs Suzani Hand-Knotted Multicolor Area Rug M1867-197
Darya Rugs M1867-197 Inspired by embroidered Suzani textiles from Uzbekistan, this rug features floral motifs in modern palettes and compositions. Hand-knotted of vegetab...
Darya Rugs M1867-197 Inspired by embroidered Suzan...
Darya Rugs Suzani Hand-Knotted Multicolor Area Rug M1867-250
Darya Rugs M1867-250 Inspired by embroidered Suzani textiles from Uzbekistan, this rug features floral motifs in modern palettes and compositions. Hand-knotted of vegetab...
Darya Rugs M1867-250 Inspired by embroidered Suzan...
Darya Rugs Suzani Hand-Knotted Multicolor Area Rug M1867-217
Darya Rugs M1867-217 Inspired by embroidered Suzani textiles from Uzbekistan, this rug features floral motifs in modern palettes and compositions. Hand-knotted of vegetab...
Darya Rugs M1867-217 Inspired by embroidered Suzan...
Darya Rugs Suzani Hand-Knotted Multicolor Area Rug M1867-192
Darya Rugs M1867-192 Inspired by embroidered Suzani textiles from Uzbekistan, this rug features floral motifs in modern palettes and compositions. Hand-knotted of vegetab...
Darya Rugs M1867-192 Inspired by embroidered Suzan...
Darya Rugs Suzani Hand-Knotted Multicolor Area Rug M1867-240
Darya Rugs M1867-240 Inspired by embroidered Suzani textiles from Uzbekistan, this rug features floral motifs in modern palettes and compositions. Hand-knotted of vegetab...
Darya Rugs M1867-240 Inspired by embroidered Suzan...
Darya Rugs Suzani Hand-Knotted Multicolor Area Rug M1867-272
Darya Rugs M1867-272 Inspired by embroidered Suzani textiles from Uzbekistan, this rug features floral motifs in modern palettes and compositions. Hand-knotted of vegetab...
Darya Rugs M1867-272 Inspired by embroidered Suzan...
Darya Rugs Suzani Hand-Knotted Multicolor Area Rug M1867-247
Darya Rugs M1867-247 Inspired by embroidered Suzani textiles from Uzbekistan, this rug features floral motifs in modern palettes and compositions. Hand-knotted of vegetab...
Darya Rugs M1867-247 Inspired by embroidered Suzan...
Darya Rugs Suzani Hand-Knotted Multicolor Area Rug M1867-281
Darya Rugs M1867-281 Inspired by embroidered Suzani textiles from Uzbekistan, this rug features floral motifs in modern palettes and compositions. Hand-knotted of vegetab...
Darya Rugs M1867-281 Inspired by embroidered Suzan...